मोबाइलको अवैध आयात बढेको गुनासो, ७ अर्ब राजस्व गुमेको दावी « Pokharaaaja
प्रकाशित मिति : 10 February, 2021 7:33 pm
अवैध रुपमा मोवाइल फोन नेपाल भित्रने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार नेपाल मोवाइल वितरक संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवाला व्यवसायीहरुले मोवाइलको अवैध आयात बढेको र यसले व्यवसायी र राज्य दुबैलाई घाटा रहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार नेपालमा मासिक आयात हुने १० लाख मोवाइल सेटमध्ये २ लाख ५० हजार सेट अवैध हुने गरेका छन् । अवैध बाटोबाट ल्याएर बजारमा पुर्‍याइएका यी मोवाइलको बिक्रीले सरकारको राजस्वमा मासिक करीब ७ अर्व घाटा भएको व्यवसायीहरुको दावी छ ।
कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नेभन्दा कानुन उलंघन गर्ने व्यापारीलाई अहिले फाइदा भइरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।सरकार, आयातकर्ता, वितरक, विक्रेता र उपभोक्ता सबै मिलेर अनधिकृत (ग्रे) मोवाइल फोनको विक्री बन्द गराउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
कार्यक्रमममा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मोबाइलको अनधिकृत (ग्रे) बजार नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । ग्रे बजार बढेको स्वीकार गर्दै उनले अवको ३ महिनामा व्हाइट लिस्टिङ् सिस्टम कार्यान्वयनमा आइसक्ने बताए । उनका अनुसार यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि हरेक मोवाइल सेट प्राधिकरणमा दर्ता गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय न्यूरोडका प्रमुख कर अधिकृत बिनोद लामिछानेले ग्रे बजार नियन्त्रणका लागि यसका लागि वृहत्तर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
यता त्रिभुवन अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद मरासैनीकाअनुसार अहिले विमानस्थलबाट दैनिक करीव २ हजार व्यक्ति भित्रने गरेका छन् । दैनिक आउनेहरु मध्ये ५० प्रतिशत बढीले मोवाइल सेट लिएर आउने गरेको उनले बताए ।
यसरी ल्याइएका सेटहरु निर्वाध प्रयोग हुने गरेका छन् । नेपाल र भारतका धेरै ठाउँमा खुल्ला सिमाना भएकाले फोनलगायत उपभोग्य सामानमा लुृकीछिपी तस्करी हुने गरेको ससस्त्र प्रहरीका डिआईजी गणेश खाडा मगरले बताए ।
मोवाइल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले पछिल्लो समय अवैध मोवाइल भित्रने क्रम निकै बढेकेा बताए । यसले व्यवसायीलाई मात्रै नभएर राज्यलाई पनि ठूलो नोक्सानी भएको बताए । उनका अनुसार आ. व. २०७५/०७६ मा मोवाइल आयातको व्यालेन्स सिट बराबर थियो । २०७६ / ०७७ मा आएर शुन्य भयो । यसको कारण मोवाइल ल्याउने अबैध बाटो नै मुख्य कारण हो । ‘नेपालसँगका नाका बन्द भएका बेला मोवाइल, ल्यापटपजस्ता सामाग्रीको आयात बढेको थियो । अहिले फेरि घट्न थालेको छ’ मलहोत्राले भने । यसले करिब ७ अर्ब राजश्व गुमेको उनको अनुमान छ ।
नेपाल मोवाइल वितरक संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्पाद्योले मोवाइल तस्करी रोक्ने कदम चलाउन ढिला भइसकेको बताए । भारतमा सस्तो र नेपालमा महङ्गो भएकोले तस्करी बढेको उनको भनाई छ । सरकारले मोवाइलमा लगाएको अन्तशुल्क हटाएर र विगतमा दिइएको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्तालाई नियमित गरेपछि मोबाइलको मूल्य सस्तो हुने उनले बताए । यसले तस्करी घट्ने उनको दावी छ ।
नेपालमा २०५६ सालबाट मोवाइल सेवा र २०५७ सालबाट मोवाइल इन्टरनेट सेवा सुरु भएको हो । २०६४ सालबाट सुरु भएको थ्रीजी सेवाको स्तरउन्नति गरेर अहिले अधिकांश सरमा फोर जी सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनेको छ । अहिले नेपालका करिव ६८ प्रतिशत मानिसले मोवाइलको र ६० प्रतिशत मानिसले इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने अनुमान छ ।